တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေကို နိုင်ငံတကာတရားရုံး တင်ပို့အရေးယူနိုင်ဖို့ အကွက်ချ ဆောင်ရွက်မှုကို ကန့်ကွက် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေကို နိုင်ငံတကာတရားရုံး တင်ပို့အရေးယူနိုင်ဖို့ အကွက်ချ ဆောင်ရွက်မှုကို ကန့်ကွက်
epa06493361 Myanmar's military Commander-in-Chief, Senior General Min Aung Hlaing deliversaspeech on the second day of the 'Sin Phyu Shin' joint military exercises in the Ayeyarwaddy delta region, Myanmar, 03 February 2018. The two-day military exercise is the biggest since 1997, involving several different branches of the country's armed forces. EPA-EFE/LYNN BO BO / POOL
တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေကို နိုင်ငံတကာတရားရုံး တင်ပို့အရေးယူနိုင်ဖို့ အကွက်ချ ဆောင်ရွက်မှုကို ကန့်ကွက်
တပ်မတော် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကို နိုင်ငံတကာတရားရုံးဆီ တင်ပို့အရေးယူနိုင်ဖို့ အကွက်ချ ဆောင်ရွက်နေတာတွေကို ၂၁ ပါတီက ဆန့်ကျင့်ကန့်ကွက်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
(Photo / EPA/ LYNN BO BO / POOL)
ဖေဖော်ဝါရီလလ ၂၅ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၁ ပါတီ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေးမှု ကောက်နှုတ်ချက်မှာ အဲ့ဒီလို ကန့်ကွက်ထားတာပါ။
အဲ့ဒီကြေညာချက်ထဲမှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အရေးကိစ္စတွေဟာ နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားတွေအတွက် အလွန်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အပြင် အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေက အစီအစဉ်ရှိရှိ ဖိအားပေး အကျပ်ကိုင်တာတွေကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားတာပါ။
ဒါ့အပြင် NLD အစိုးရအနေနဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ နယ်နိမိတ်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း သတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။
တပျမတျော ခေါငျးဆောငျတှကေို နိုငျငံတကာတရားရုံး တငျပို့အရေးယူနိုငျဖို့ အကှကျခြ ဆောငျရှကျမှုကို ကနျ့ကှကျ
တပျမတျော ထိပျပိုငျးခေါငျးဆောငျတှကေို နိုငျငံတကာတရားရုံးဆီ တငျပို့အရေးယူနိုငျဖို့ အကှကျခြ ဆောငျရှကျနတောတှကေို ၂၁ ပါတီက ဆနျ့ကငျြ့ကနျ့ကှကျကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွားလိုကျပါတယျ။
ဖဖေျောဝါရီလလ ၂၅ ရကျနကေ့ ရနျကုနျမွို့မှာပွုလုပျတဲ နိုငျငံရေးပါတီ ၂၁ ပါတီ တှဆေုံ့ပှဲမှာ ဆှေးနှေးခဲ့တဲ့ ဆှေးနှေးမှု ကောကျနှုတျခကျြမှာ အဲ့ဒီလို ကနျ့ကှကျထားတာပါ။
အဲ့ဒီကွညောခကျြထဲမှာတော့ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ဖွဈပျေါနတေဲ့ အရေးကိစ်စတှဟော နိုငျငံတျောနဲ့ နိုငျငံသားတှအေတှကျ အလှနျစိုးရိမျဖှယျရာ အန်တရာယျဖွဈလာနိုငျတဲ့အပွငျ အငျအားကွီး နိုငျငံတှနေဲ့ နိုငျငံတကာ အဖှဲ့အစညျးတှကေ အစီအစဉျရှိရှိ ဖိအားပေး အကပျြကိုငျတာတှကေို ဆနျ့ကငျြကနျ့ကှကျတယျလို့လညျး ဖျောပွထားတာပါ။
ဒါ့အပွငျ NLD အစိုးရအနနေဲ့ အခြုပျအခွာအာဏာပိုငျဆိုငျမှုနဲ့ နယျနိမိတျတညျတံ့ခိုငျမွဲရေးအတှကျ ပွတျပွတျသားသား ရပျတညျကာကှယျဖို့ တာဝနျရှိတယျလို့လညျး သတိပေးပွောကွားထားပါတယျ။
Previous articleMCN DESIGN MAGIC PROGRAM 2018 FEB 26
Next articleသက်ငယ်မုဒိမ်း သေဒဏ်ပေးဖို့ ၂၁ ပါတီက တောင်းဆို